Mitsubishi T-2 nbudata FSX SP2 & P3D - Rikoooo
downloads 11 577
Japanese mbụ supersonic ugbo elu, a virtual nlereanya na-awa site anyị anyị hụrụ n'anya Tim Conrad.
Ụgbọelu nnọọ mwute ma n'ụzọ zuru okè gh, nlereanya bụ nke yiri nke French Jaguar. Full 3D VC na clickable, HD textures na ezi uche reflections, gụnyere abụọ repaints na omenala ụda.
Ị ga-enye ya a agbalị.
The Mitsubishi T-2 bụ a ugboelu ọzụzụ ugbo elu e mere na-arụpụtara site Japan. Ọ na-n'ụzọ doro anya sitere n'ike mmụọ nsọ SEPECAT Jaguar na-onwem na otu engine (na Adour apụta-Royce / Turbomeca wuru n'okpuru ikikere). The T-2 e wuru 90 mbipụta nyere na 1975, na ọfiọrọ agha ugbo elu mgbe e mesịrị ẹkedọhọde Mitsubishi F-1.